Koonfurta Kuuriya oo damacsan inay ciidamo hor leh oo la dirira Burcad-badeeda u soo dirto gobolka – Radio Daljir
Diseembar 23, 2013 1:25 b 0
Seoul, December 23, 2013 – Guddiga difaaca baarlamanka dalka kuuriyada koonfureed ayaa maanta meel mariyey in la kordhiyo ciidamada dalkaas ka socda ee ku jira howl-galka la dagaalanka Burcad-badeeda Soomaalida.
Wakaalada wararka Koonfurta Kuuriya ayaa tebisay warka sheegaya in guddigu qorshahaas ansixiyey, sida war-bixinta lagu sheegay hadii baarlamanka si buuxda u meel-mariyo fikradan waxaa xeebaha gobolka loo soo diri doonaa ciidamo dheeraad ah.
Sidoo kale waxaa sii shaqayn doona ciidamadii Koonfur kuuriya ee gobolka joogay muddo hal sano oo kale ah.
Wakaalada wararka ee dalkaas sidoo kale waxay baahisay in la kordhin doono wakhtiga howl-galka ee ciidamo ka socda dalkaas oo tababar ku bixiya bariga dalka UAE, tababarkaas waxaa ka faa?iidaysta ciidamo ka socda dalalka bariga dhexe.
Howsha wakhti kordhinta waxaa soo gelaya ciidamo isugu jira gargaar bixiyaal iyo boolis ku sugan woqoyiga Afghanistan, kuwaas oo sii shaqayn doona ilaa bisha june ee sanadka soo socda hadii la ansixiyo, sida lagu sheegay warka wakaalada.
Koonfurta Kuuriya waxaa kaga sugan xeebaha gobolka 310 Askari oo ku jira howl-galka la dagaalanka Burcad-badeeda Soomaalida tan iyo 2009, 150 Askari ayaa tababar ku bixiya iyana dalka Emaratka carabta, halka 150 gargaar sidayaal iyo boolis ah ay ku sugan yihiin magaalada Charikar ee dalka Afghanistan tan iyo 2010.